Moto E 4G tsy namboarina | Androidsis
Hetsika fanolorana Motorola Moto E 4G vaovao, ny Moto E 4G tsy misy fonosana na aiza na aiza no safidinao!
Raha andro vitsy lasa izay Nampahafantarinay anao tamin'ny Androidsis ny mailaka hafahafa sasany nalefan'i Motorola tamin'ny media hafa Momba ny fandefasana boaty mistery izay hisy ny zava-drehetra ilainao hahafantarana ilay fitaovana Motorola vaovao. Ny hafatra sasantsasany izay nilazany ilay fehezanteny hoe ny tenantsika mihitsy no hanapa-kevitra hoe aiza sy oviana no hankafizantsika azy.
Eny, araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary mifandraika amin'ity lahatsoratra ity, ity Motorola Moto E 4G tsy namboarinaLavon'ny hetsika lehibe alefa mivantana avy amin'ny tanàna lehibe sy manandanja iray, fantatrao hoe aiza, mandany ny fieboeboana sy fiderana tsy misy farany. Motorola, toy ny efa niseho ny fampisehoana ny Motorola Moto G 2014 ary Moto X 2014 avy amin'ny IFA14 any Berlin, izay tsy nametrahany Stand akory tamin'ity hetsika ity ary nisafidy fampisehoana manokana tao amin'ny hotely hotely iray tao amin'ny tanàna Alemanina, tamin'ny alàlan'ny fanasana taloha ho an'ny fampahalalam-baovao mifandraika indrindra amin'ny sehatry ny teknolojia. Tamin'ity indray mitoraka ity dia te-hikorontana ny curl izy ireo ary hamaky ny bobongolo rehetra amin'ny fampisehoana ofisialy ao an-trano. Fampisehoana ofisialy izay, amin'ny alàlan'ity horonantsary tsotra ity Te hizara aminareo namana sy mpamaky Androidsis rehetra aho. Noho izany dia vahinin'ny VIP ianao amin'ity Moto E 4G tsy voaangona ary ianao no misafidy hoe rahoviana ary aiza no fotoana ahitanao azy. Manasa anao àry.
Tsy isalasalana fa asehon'i Motorola antsika izany ny terminal izay misy fiasa mihoatra ny antonony dia azo amidy amin'ny vidiny mirary mihoatra ny vidiny Ary tsy mila filàna, mba hankafizana finday finday Android tsara, tsy maintsy avela ao amintsika ny tahirintsika na amin'ny tranga efa tena henjana aza, saika mila mandoa vola indray ny tranontsika hahazoana izany.
Azo antoka fa hanontany tena ianao hoe, ahoana no fanatanterahana izany? Ny valiny izay mitranga amiko dia mora toa mitahiry dokam-barotra na aiza na aiza na amin'ny fampisehoana lafo be amin'ny hetsika lehibe izay ny hany zavatra tratra dia ny fampiakarana ny vidin'ny vokatra farany.
Afaka andro vitsivitsy, manararaotra ny fandraisana an'ity vaovao ity Motorola Moto E 4G, eto ihany Androidsis Azonao atao ny mahita ny famerenana horonantsary feno momba ny terminal izay hasehonay anao ny masontsivana rehetra momba azy ara-teknika ary koa ny fahombiazany amin'ny fampiasana isan'andro mihazakazaka fampiharana isan-karazany izay ampiasain'ny ankamaroantsika matetika matetika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Hetsika fanolorana Motorola Moto E 4G vaovao, ny Moto E 4G tsy misy fonosana na aiza na aiza no safidinao!
Google Play Music dia mampitombo ny fitehirizana hira 50.000 XNUMX maimaim-poana
MT6795 processeur manakaiky ny Qualcomm sy ny Snapdragon 810